Waraysi Madaxweyne Gaas: Horumarinta Kaabayaasha Dhaqaalaha Puntland – Radio Daljir
Waraysi Madaxweyne Gaas: Horumarinta Kaabayaasha Dhaqaalaha Puntland
May 5, 2017 10:02 b 2
Sannadihii ugu dambeeyey dawladda Puntland ayaa ku hawlanayd qorshayaal ay ku doonayso in ay kor ugu qaaddo, kuna casriyeyso kaabayaasha dhaqaalaha Puntland sida garoomada, dekedaha iyo Jidadka.
Sannad kahor waxaa farta laga gooyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Bossaso, kaasoo laga dhigay garoon caalami ah, waxaana sidoo kale haatan heer gabagabo ah maraya garoonkii diyaardaha ee magaalada Garoowe, kaas oo dhismihiisu uu soo bilawday sannadkii hore ee 2016. Sidoo kale dhawaan waxaa la dhagaxdhigay garoonkii diyaaradaha Galkacyo, kaas oo isna dhawaan bilaabanaya.
Dhinaca kale dhawaan waxaa loo ballansan yahay bilaabashada mashruuc lagu ballaarinayo dekedda magaalada Bossaso, mashruucaasi oo bishii hore heshiiskiisu uu ka dhacay dalka iskutagga Imaaraadka Carabta, waana mashruuc ku kacaya adduun dhaqaale oo gaaraya illaa 350 milyan oo dollar, iskuguna jira ballaarin dekedda ah oo qayb cusub lagu siyaadinayo iyo dayactir lagu samaynayo dekedda shaqaysa laftigeeda, siiba inta haatan doonyaha iyo maraakiibku ku xirtaan.
Ka sokow dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha, waxaa jira mashaariic kale oo mug leh oo ka socda Puntland, laga hirgaliyey magaalooyinka waaweyn, degmooyinka laamiga ah, iyo kuwa ka baxsan iyo dhulka tuulooyinka ahba, kuwaasi oo badankoodu la xiriira horumarinta Puntland, ayna ka midyihiin caafimaadka, biyaha, jidadka iyo arrimo kale oo muhiimad weyn leh.
Haddaba si aan wax badan uga ogaanno arrinkaasi hormarinta iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland, waxaan uu Radio Daljir wareysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya la yeeshay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, waxaana wareysigaasi madaxweynuhu uu uga warramay guud ahaan arrimaha hormarineed ee Puntland iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalah siiba mashaariicda hirgalay, laguna guulaystay saddexdaas sanno, kuwo socda weli ee aan dhammaan iyo kuwa hadda bilaabanaya.
Haddaba hoos ka dhegayso wareysiga madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo dhammaystiran.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 287 Wararka 10070
Maanhadal: Barnaamij Gaar ah oo ku Saabsan Kulankii Madaxweyne Gaas iyo Bulshada Gaalkacyo (Dhegayso)
Maamulka Hirshabeelle oo Diidey Qorshaha Horumarinta Qaranka (Dhegayso)
Wariyr Hana 1 year
mzha allh madax waynha inta harzna wuu dhmyztirin izha ah
Xùsñì Ãbđī Šâłããm 1 year
madax waynuhu waxyaaba muhiim ah ayuu kahadlay